Maintenance Releases for OroPlatform, OroCRM CE, and OroCRM EE 2.0.2 Are Now Available - OroCRM - Open-Source CRM
Maintenance Releases for OroPlatform, OroCRM CE, and OroCRM EE 2.0.2 Are Now Available February 22, 2017 by
We’d like to inform our community of the immediate availability of the maintenance releases of version 2.0.2 for OroPlatform, OroCRM Community Edition (CE), and OroCRM Enterprise Edition (EE). Note that the updates in these releases refer to the up-to-date version of OroCRM and OroPlatform to support the customers who have already switched to the version 2.0. If you have not upgraded to OroCRM and OroPlatform 2.0 yet, you may consider this post irrelevant. Learn more about our new OroCRM versioning convention for both editions of OroCRM.
The above mentioned maintenance releases provide regular application bug fixing and deliver general performance improvements. For the complete list of enhancements, please visit our GitHub repositories or simply follow the links below (please first log into GitHub):
OroPlatform CE 2.0.2 Application (click here to check out the release notes)
OroCRM CE 2.0.2 Application (click here to view the release notes)
OroCRM EE 2.0.2 Application * (click here to view the release notes)
* The link leads to private GitHub repository, open to the OroCRM EE users only.